musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Thailand mosque inogamuchira vanamati zvakare
tsika nemagariro • Health News • nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Akasiyana Nhau
Kunamata kunotenderwa mumamosheni eThaialnd zvakare
Sheikul Islam Office (SIO) muThailand yakabvumidza kutanga kweminamato kumamoski munharaunda umo makumi manomwe ezviuru zvevanhu vane makore gumi nemasere kana kudarika vanobayiwa COVID-70.
Kune anosvika mazana matatu nemakumi mashanu emamoski muThailand ane huwandu hukuru muPattani Province uye anonyanya kusangana neSunni Islam.
Nguva yekunamatira mumosque ichaganhurirwa kumaminetsi makumi matatu, kunze kweChishanu apo vanamati vanogona kunamatira kwemaminetsi makumi mana nemashanu.
Matanho ehutano eruzhinji anofanirwa kuteverwa kusanganisira kupfeka kumeso kumeso, kuremedza munharaunda, uye kushambidza maoko.
SIO yakaburitsa chirevo ichiti ikozvino inobvumira minamato mumamoski munharaunda umo makomiti eIslam ematunhu nemagavhuna ematunhu vakasarudza kurerutsa zvirambidzo pamabasa echitendero.
Ihofisi inoda kuti nhengo dzekomiti yeIslam kumamoski uye vanamati vabaiwe jekiseni kamwe chete. Nguva yekunamatira inogumira kumaminetsi makumi matatu neminamato yeChishanu kusvika isingasvike maminitsi makumi mana nemashanu.
Maererano Sheikul Islam Hofisi, vanopinda vanofanirwa kutevedzera zviyero zvehutano zveveruzhinji uye chiziviso cheSIO. Ivo vanodiwa kuti vatarisirwe tembiricha yemuviri wavo vasati vapinda musikiti, kupfeka kumeso kumeso, uye chengeta chinhambwe che 1.5 kusvika 2 metres pakati pemutsara wega wega panguva yekunamata. Ruoko sanitizing gel rinofanira kuwanikwa zvirinyore.
Tairendi ine mamoski e3,494, sekureva kweNational Statistics Hofisi yeThailand muna 2007, iine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nenatanhatu, yakawanda kwazvo munzvimbo imwechete, mudunhu rePattani. Sekureva kweDhipatimendi Rezvezvitendero (RAD), 636 muzana yemamoski akabatana neSunni Islam pamwe neasara muzana muzana Shi'i Islam.
Vanhu veThailand vechiMuslim vakasiyana, nemadzinza akatama kubva kure seChina, Pakistan, Cambodia, Bangladesh, Malaysia, neIndonesia, pamwe nekusanganisa rudzi rwevaThai, nepo zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevaMuslim muThailand vari maMalay Thai.
Kazhinji vatendi vechitendero cheIslam muThailand vanotevedzera dzimwe tsika netsika zvine chekuita neyakajairika chiIslam chakakanganiswa neSufism. Kune vechiThai maMuslim, sevamwe vavo-coreligionists muSoutheast Asia dzimwe nyika dzeBuddhist-zhinji, Mawlid chiyeuchidzo chekufananidzira kwehupenyu hweIslam munyika. Izvo zvakare zvinomiririra mukana wepagore wekusimbisazve chinzvimbo chevaMuslim sevagari veThai nekuvimbika kwavo kuhumambo.
Kutenda kweIslam muThailand kunowanzo kuratidza zvitendero zveSufi nemaitiro sedzimwe nyika dzeAsia senge Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, neMalaysia. Ministry of Culture Dhipatimendi reIslam inopa mibairo kuvaMuslim avo vakabatsira mukusimudzira nekusimudzira hupenyu hweThai mumabasa avo sevagari, sevadzidzisi, uye sevashandi vezvemagariro. MuBangkok, Ngarn Mawlid Klang mutambo mukuru unoratidzira zvine mutsindo munharaunda yeThai Muslim nemararamiro avo.